क्यूट नायिका अनन्या पाण्डेको मोवाइल नं लिक !!! फोन रिसिभ गर्दा गर्दा हैरान !!! « गोर्खाली खबर डटकम
क्यूट एक्ट्र्ेस अनन्या पाण्डे सोशल मिडियामा धेरै एक्टिभ रहन्छिन् । उनि लगातार आफ्नो फोटो, भिडियो सोशल मिडियामा शेयर गरिनै रहन्छिन् । के तपाईलाई थाहा छ एक चोटी उनको मोवाइल नं. इन्टरनेटमा लिक भएको ? हुनत यसमा अनन्याको गल्ती थिएन, गल्ती उनकी सानी वहिनीको थियो ।
अनन्याकी कजन अलाना पाण्डेले हालसालै आफ्नो एक भिडियोमा यसको वारे जानकारी दिएकी छिन् । अलाना पनि अनन्या जस्तै सोशल मिडियामा धेरै नै एक्टिभ रहन्छिन् । उक्त भिडियोमा अलाना भन्छिन् उनि अनन्या र रायसालाई लामो समय देखि भेट्न पाईरहेकी हुँदैनन् र उनैले अनन्याको मोवाइल नं इन्टरनेटमा शेयर गरेको पुरानो कहानी पनि सुनाउँछिन् ।
खासमा रायसा डाईरेक्टर वन्न चाहन्छिन् । केहि समय अगाडि उनले एक सर्ट फिल्म पनि वनाएर यूट्यूवमा अपलोड गरेकी थिईन । त्यहीँ उनको एक गल्ती भएको थियो । रायसाले ध्यान दिएको थिएनकी त्यही फिल्मको एउटा भागमा अनन्याको फोन नं. पनि देखिरहेको हुन्छ । यस वारे रायसाले भनिन् मैले दिदिको नम्वर लीक गरेको थिए ।
जवकि अनन्याको भनाईछ कि मेरो नम्वर फिल्मको एउटा भागमा थियो र यो वारे मलाई केही थाहा थिएन । फिल्म अपलोड भए पछि मलाई धेरै फोन कलहरु आउन थाले । पछि रायसालाई भिडियो डिलिट गर्नु पर्यो र पुन सच्याएर अपलोड गर्नु परेको थियो ।
कामको कुरा गर्नु पर्दा हाल अनन्या ईशान खट्टरको फिल्म खालीपीली मा देखेकी थिईन् । चांडै नै अनन्या, विजय देवरकोंडाको साथ फिल्म लाइगरमा आउने छिन् । फिल्म ९ सेप्टेम्वर २०२१ मा रिलिज हुनेछ ।
हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी हुन्छ यो फल, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग